Faah-faahin khasaaraha qaraxyadii caawa Muqdisho ka dhacay. – Radio Daljir
Seteembar 20, 2012 11:29 b 0
Gaalkacyo, Sep 20- Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa weeraro qaraxyaa oo caawa fiidkii ka dhacay goob maqaaxiya oo ay inta badan ku kulmaan magaaladda Muqdisho.
Illaa iyo hadda si rasmi ah? looma xaqiijin karo khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac balse waxaa la xaqiijiyey iney ahaayeen kuwo ay fuliyeen laba ruux oo qaraxyo lagu soo xiray? kuwaasi oo iyagu isku qarxiyey goobaha ay dadku kaga badnaayeen maqaayadan oo lagu magacaabo Vilage oo ku dhegan guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho.
Wariyaheena Cali C/qaadir Maykal oo goor dhaw aynu la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay Magacyada wariyeyaasha aynu helnay iney goobta ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah Allaha U naxariistee Liibaan Cali Nuur oo ahaa madaxii wararka ee Telefishinka Qaranka, Cabdi Sataar Daahir Sabriye oo ahaa Madaxii Barnaamijyada Telefishinka Qaranka, C/raxmaan Yaasiin oo ahaa Agaasimahii VOD Radio Xamar.
Wariyeyaasha iyana goobta ku dhaawacmay waxaa ka mid ah C/laahi Maxamed Cali Suldaan wakiilka Radio daljir ee Muqdisho, Maxamed Xuseen Gentelman oo ka tirsanaa Wariyeyaasha ka howlgalla Telefishinka iyo Raadiyaha Qaranka, Suldaan iyo Shiine oo iyaguna ka wada tirsanaa Radio Kulmiye iyo C/kariin Guutaalle waxaana dhaawacyadooda lakala gaarsiiyey isbitaallada Madiina iyo Daarul-Shifa ee magaalada Muqdisho, tirada dhimashada ayaa intaas ka badan karta maadaamaa dhaawacyadu qaarkood ay yihiin kuwo culus.
Dadka goobta ku dhintay waxey u badan yihiin dad rayid ah oo maqaayada ka qaxwaynayau? kuwaasi oo meydadkooda ilaa hada ay gaadiidka gurmadka deg dega ah goobta ka daabulayaan, xaaladda ayaana hada cakiran, goobta qaraxyadu ay ka dhaceen ayaa ka mida goobaha ugu ammaanka roon caasimadda.